Talking about FamilyEdit
Daawit: Maatiin kee eessa jiratu?
Caalaa: Maatiin koo Amerika jiratu.
Daawit: Maatiin kee maal hojjetu?
Caalaa: Haatti fi abbaan koo barsiisoota dha.
Daawit: Obboleettiin kee hoo?
Caalaa: Isheen barreessituu dha. Maatiin kee eessa jiru?
Daawit: Maatiin koo Adaamaa jiratu. Obboleessii kiya Finfinnee jirata lama fi obboleettii tokko hadama jirattun.
Caalaa: Maatiin kee maal hojjetu?
Daawit: Abbaan koo doktarii dha. Haatti koo haadha mana dha.
Caalaa: Obboleessi fi obboleettin kee hoo?
Daawit: Obboleessi koo angafaa abukaattoo fi obboleessi koo quxisuun maandisa dha. Obboleettiin koo barattuu fi keessummeessitu dha.
Caalaa: Umuriin obboleettii kee meeqa?
Daawit: Waggaa kudha sagal.